Warar & Isbeddello |
Wac Taageero 86-13682157181
kursi bir ah
Miiska Dhinac Dambiil
2 Kursiga Fadhiga
Fadhiga kuraasta badan
Miiska cuntada oo leh miis dushiisa MDF
Waxaa jira miis dusha sare ee miiska cuntada, sida muraayadda la qaboojiyey, alwaax adag, fiberboard dheelitir dhexdhexaad ah iwm, Dhexdhexaad Cufnaan Dhexdhexaad ayaa loo soo gaabiyaa MDF. Sabuuradda dhexdhexaad-cufnaanta waa nooc ka mid ah loox-sameeyaha bini-aadamka oo ka samaysan alwaax ama dhir dhir iyada oo loo marayo kala-soocida farsamada iyo daaweynta kiimikada ...
Kursiga Cunitaanka ee Dalacsiinta
Hal kursi oo qadada ah oo kor u qaadis ah sidoo kale waxaan leenahay faa iidada ugu weyn: waqtiga dhalmada oo gaaban waxayna qaadataa 7-10 maalmood oo kaliya in alaabtu diyaar noqoto. Iyada oo dhar jilicsan oo aad u qaro weyn leh, waxay dareemeysaa mid jilicsan oo jilicsan markaad taabato. Ka sokow, mid ka mid ah alaabada ugu iibinta badan adduunka, ...
Xulista Dharka loogu talagalay Kuraasta Cunnada, Kuraasta Fadhiga iyo Soofasyada
Waaxeena R & D kaliya ma ahmiyada saaraan qaabka badeecada hadey tahay kursi cunitaan, kursi fadhiga, fadhiga iwm, Laakiin sidoo kale dharka moodada ah waa mid kamid ah waxyaabaha aan tixgalineyno. Xilli kasta, Si aan kuu siino fursado badan adiga iyo macaamiishaada, waxaan raadin doonnaa dharka ugu dambeeyay ee caanka ah ...
Guddoomiyaha Cunnada Qaabdhismeedka KD ee loogu talagalay E-Ganacsiga
Ganacsiga E-ganacsiga si weyn ayaa loo ballaariyay sababtoo ah faafida, sidaas darteed kharashka saadka ee badeecada waa shey muhiim u ah iibka E-commerce. Waxaa jiray dalab aad iyo aad u badan oo loogu talagalay alaabada ku jirta warshadaha qalabka guryaha inay ku jiraan qaab dhismeedka KD taas oo hubin doonta cabirka ugu badan ee xamuulka ...
Waxyaabaha loogu talagalay Qalabka guryaha ee Xafiiska
Hoos ku xusan kursigeena xafiiska iibka kulul ee 6 ee leh soo bandhig sawir, alaabooyin badan oo rasmi ah oo sawir rasmi ah ayaa la diri doonaa marka aad kula talisid qaabka aad dooratay. Naqshad qurxoon oo quruxsan oo quruxsan oo ay weheliso hawsha qaadista si loo buuxiyo shuruudaha dadka ee muuqaalka iyo raaxada ah. Lixda badeecadood waxay leeyihiin dib-u-hel ...
Kuraasta Cunitaanka Iyo Kursiga Xafiiska
Waxay noo ahayd toddobaad mashquul nagu ah ka baaraandegista amarro cusub oo na soo gaadhay intii carwadu socotey isla markaana lala tacaalayey weydiimaha cusub ee na soo gaadhay. Kuraasidan cuntada ee hoose waxaan jeclaanlahaa inaan idin soo bandhigo waa laba nooc oo ah badeecadayada iibinta kulul waxaana amarro lagaliyay goobta carwada iyo carwada kadib. Iyada oo ay ...
Alaabta Shaqada: Kaydinta Pouf
Saaxiibbada qaaliga ah ee KSD, Pouf oo leh hawsha kaydinta had iyo jeer waxay ka mid ahayd qaybaha muhiimka ah ee qurxinta guriga. Waxay u baahan tahay inay lahaato labadaba kaydinta iyo astaamaha qurxinta, iyada oo aan la qaadanaynin boos badan. Pouf-ka aan maanta kugula talinayno waa qaab dhululubo ah, DIA 33 cm iyo dherer 38 cm. Waxay leedahay dabool dusha sare ...
Dejinta Cuntada: Miiska Cunitaanka iyo Kursiga Cunnada
Casho waa mid ka mid ah muujinta ay dadku jecel yihiin markay doonayaan inay muujiyaan dareen ama shucuur. Iyo sida xamuulka miiska cuntada, waxay si tartiib tartiib ah u noqotay qayb muhiim u ah jawiga. Maanta, waxaan jeclaan lahaa inaan soo bandhigo mid ka mid ah qalabkayaga cuntada - hal miis iyo lix kursi. Nadiifi temere ...
Bench leh Dharka Dharka
Waxaa qoray admin on 21-05-06
Iyada oo ay weheliso isbeddelka qolka cuntada ee casriga ah, kursiga beddelka kursiga ayaa noqda mid aad iyo aad u caansan beryahan. Kaliya 1 kursiga keydka, 2 kursi oo wax lagu cuno iyo 1 miis cuntada lagu cuno, ka dib waxaad heleysaa 4 fadhi oo cuntada lagu fadhiisto Si fudud oo gaar ah. Marka maanta, waxaan kugula talineynaa mid ka mid ah kursigeena keydka ah, kursiga dharka lagu qurxiyo, Bl ...
Guddoomiyaha Cunitaanka Swiveling
Iyada oo ay sii kordheyso baahida loo qabo qalabka guryaha ee shaqeynaya ee qoysaska, “Furniture + Function” ayaa ah isbeddellada oo aad iyo aad u sii caansan. Alaabta shaqada sida fadhiga fadhiga, fadhiga fadhiga, miiska qaxwada lagu keydiyo, kursiga isweydaarsada iwm ayaa macaamiisha soo dhaweynayaan. Talooyinka maanta, th ...
Kursiga Cuntada Cad
Maalmahan waxaan helnay dalab aad u ballaaran oo ah kursi soosocodka iibinta kulul ee soo socda oo aan jeclaan laheyn inaan halkaan ku wadaagno. Haddii aad jeceshahay sheyga xarrago leh oo aad amar ku bixiso xilligan, markaa waxaa lagugu qoondeyn doonaa qiime aad u qurux badan, maxaa yeelay qiimaha qaybta ayaa aad u hooseeya baahida weyn iyo soosaarka tirada badan ...
Nice Pouf si loo qurxiyo guriga
Saaxiibbada qaaliga ah ee KSD, waxaad moodaa in boofaarta iyo saxarada yar yar ay caan ku yihiin marinkeeda isla markaana ay fududahay inay iskula jaanqaadaan alaabtaada kale qolka fadhiga sida fadhiga iyo miiska kafeega. Ka sokow, waxaa loo isticmaali karaa labadaba fadhiga iyo miiska yar, taas oo waxtar weyn u leh in qolkaaga loo hagaajiyo. Maanta waxaan jeclaan lahaa ...
Cinwaanka: Galbeedka Wadada Langda, Tuulada Fengliu, Magaalada Shengfang, Magaalada Bazhou, Gobolka Hebei, Shiinaha.